Catt Sadler anoratidza maitiro aari kuita zvemari mwedzi gumi nesere mushure mekusiya E! pamusoro pekupokana kwemubhadharo wechikadzi - Nhau
Kuru Macelebs Blog Style Nhau
Catt Sadler anoratidza maitiro aari kuita zvemari mwedzi gumi nesere mushure mekusiya E! pamusoro pekupokana kwemubhadharo wechikadzi
Catt Sadler akaita misoro muna Zvita 2017 paakasiya basa rake kuE! network, kwaakashanda kwemakore gumi nemaviri, mushure mekudzidza murume wake E! Anoshanda naye wenhau, Jason Kennedy, anga achiwedzera zvakapetwa muhoro wake.
Kufambisa / REX / Shutterstock
Zvino, gore nehafu gare gare, ari kutaura pamusoro pekuti ari kuita sei zvese zvemari uye nemanzwiro mushure mekuita danho rakakura rekusiya nekudana netiweki kune izvo zvinozivikanwa sekusarongeka kwemubhadharo wechikadzi.
Muhurukuro nyowani na Peji Rechitanhatu , Catt - anga achizvimiririra, achitaura pamberi pevanhu, achitora magigs (senge kapeti tsvuku livestream kuVanity Fair Oscar Party) uye achishanda pazvirongwa zvake (zvakadai kugadzira chirongwa cheTV cheTNT uye kugadzirira kuvhura podcast 'Akashama naCatt Sadler' muna Chikumi 6) - akaudza Peji Rechitanhatu kuti haademba sarudzo yake.
'Ini ndatora kusvetuka kwekutenda kunobva pachokwadi chechakanaka kubva pane chakaipa uye, chokwadi, kuziva - uye nenzira, zvakatora mweya yakawanda kutsvaga - kukosha kwangu,' akadaro. 'Ndaifanira kubheja pandiri. Ndingaende here ndonoenda kune rimwe basa ndigadzire ndigadzire…. uye kuramba ndichibhadhara zvikwereti zvangu uye nekuita zvandinofanira kunge ndichiita? '
ndiani taraji henson akaroora
Mhinduro ndeyokuti hungu. Amai vevaviri vakaudza gonyeti reNew York Post kuti anofunga kuti anokwanisa kusvika pamari yaanofunga kuti akakosha.
'Pasina mubvunzo, hongu. Sa, hongu. Uye ini ndinonzwa kuti iwo unenge wave mubairo mukati mawo pachawo. Nekuti tingave tichiita hurukuro gore nehafu [mushure mekunge ndasiya E!] Uye ini ndaifanira kutama uye handina kukwanisa kubhadhara yangu mota kubhadhara, 'akadaro. 'Ingadai yakaenda kune imwe nzira, uye ngatitii haina kana zvachose. Ndagadzikana uye ndinotenda, uye ndiri munzira chaiyo mune zvemari nepandinofanira kunge ndiri. '
Kudzoka muna Ndira 2018, Frances Berwick, mukuru weNBC anotarisira E !, akadzivirira zvisarudzo zvemambure zvemubhadharo . Akabvuma musiyano wemubhadharo pakati peizvo Catt naJason vaiwana asi akati zvaive zvakakodzera kupihwa mabasa avo.
Mukutaura kuvatsoropodzi veTV, TMZ yakashuma panguva iyoyo, Frances akatsanangura, 'Kune zvakawanda zvisiri izvo kunze uko. Catt Sadler naJason Kennedy vaive nemabasa akasiyana uye nekudaro mihoro yakasiyana. Catt yaive yakanangana nenguva dzemasikati. Jason Kennedy ari panhau yepamusoro, yemanheru, pamwe nekapeti tsvuku. '
'Vashandi vedu mihoro yavo inoenderana nebasa ravo uye nehunyanzvi hwavo, zvisinei nekuti murume kana mukadzi,' akawedzera Frances. 'Saka tinoshuvira Catt zvakanaka, asi ndinotarisira kuti ndizvo zvinonyatsorongedza ipapo.'
phaedra uye apollo vakarambana
christina el moussa uye tarek
toby izvi isu takaonda
madzimai edzimba eatlanta phaedra mapaki